तिथि मेरो पत्रु » निर्देशन जनावर
द्वारा Therese Kopiwoda
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल. 05 2020 |3मिनेट पढ्न
लगभग पाँच वर्ष अन्ना थुमा लागि, 36, निराश संघर्ष छ. त्यो डाक्टर ले मदत खोजे छ, दबाइ काउंटर विभिन्न औषधीको र लिएको, भिटामिन, र सबै प्रयास मा प्राकृतिक उपचार को एक सरणी यसलाई नियन्त्रण गर्न. के सायद उसलाई अवसाद विरुद्ध लड्ने लागि सबैभन्दा स्वागत र प्रभावकारी औषधी भएको छ, तथापि, एक बेवास्ता को रूप मा संयोगले उनको आए, सात वर्ष पुरानो सीमा कोल्ली माइक नाउँका. एक सीमा कोल्ली उद्धार समूह सक्रिय छ जो उनको एक मित्र घर माइक ल्याउन र तिनलाई हेरचाह गर्न अन्ना विश्वस्त. “यो एक्लै बस्न गाह्रो थियो,” उनी भन्छिन्, “कहिलेकाहीं घर आउन गाह्रो. मलाई सामना मात्र कुरा सफाई थियो, टेलीभिजन, कम्प्युटर, टेलिफोन; कुनै अन्य जीवित अस्तित्व. माइक कि परिवर्तन भएको छ. घर आउन र उहाँलाई मेरो लागि प्रतीक्षा छ राम्रो ITIS. मेरो साथीले एउटा पनि मलाई एक भन्नुभयो
मेरो स्वभाव परिवर्तन छोटो समय म माइक मिल्यो पछि. म पनि खुसी देखिन्थ्यो।”
अनुसन्धानकर्ताहरूले अन्ना जस्तै पाल्तु जनावर मालिक सबै साथ दाबी गरेका छन् के समर्थन गर्न कुनै पनि वैध चिकित्सा प्रमाण छ कि छैन निर्धारण गर्न काम गर्दै, घरपालुवा जनावरको आफ्नो जीवनमा सकारात्मक फर्क कि. हालैका वर्षहरूमा अध्ययन यस्तो एक्लै बस्ने ती रूपमा मान्छे को समूहहरु संग गरिएको छ, वृद्ध, र पनि के स्वास्थ्य लाभ हेर्न युगल विवाह, कुनै पनि भने, जनावर पाल्नु देखि प्राप्त छन्. यी अध्ययन भौतिक देख साथै जनावरहरूको स्वामित्व भावनात्मक पक्ष समावेश छन्.
करेन एलन, चिकित्सा विभाग देखि अनुसन्धान वैज्ञानिक, भैंसि मा न्यूयोर्क राज्य विश्वविद्यालय, घरपालुवा जनावरको मानिसहरूमा छ शारीरिक प्रभाव अनुसन्धान मा माहिर. संलग्न उनको अध्ययन को एक 48 दलाल, जसलाई सबै ऐस inhibitors संग उपचार भइरहेको थियो, उच्च रक्तचाप लागि दबाइ. तिनीहरू सबै एक्लै बस्नुहुन्थ्यो र अध्ययन गर्न पूर्व कम्तीमा पाँच वर्ष को लागि जाते स्वामित्व थिएन. एलन घरपालुवा हेरचाह गर्न हालतमा र इच्छा भएका व्यक्तिहरूलाई छनौट. 'म पक्का गर्न चाहन्थे यी धेरै जिम्मेवार मानिसहरू थिए,’ उनी भन्छिन्. तिनीहरूले घरपालुवा जनावरको खटाइयो एक समूह को भाग हुन चयन भएको थियो भने त्यो पनि तिनीहरूलाई प्रत्येक आफ्नो जीवन मा घरपालुवा स्वागत गर्नेछन् सुनिश्चित गरे. अध्ययन थाल्दा, सहभागीहरूमा आधा जथाभावी चयन र एक कुकुर वा बिरालोमा को आफ्नो रुचि प्राप्त गर्न सोधियो. छ महिना को अन्तमा, तिनीहरूले सबै प्राप्त ऐस inhibitors थिए जब, पालतू-मालिक समूह मा ती मानिसहरूले घरपालुवा जनावरको बिना भन्दा तनावपूर्ण समयमा एकदम अधिक स्थिर. तिनीहरूले कम गैर पाल्तु जनावर-मालिक समूह भन्दा रक्तचाप र दिल दर वृद्धि को देखाए. अध्ययन पूरा भएपछि, र सहभागीहरू परिणाम भनिएको थियो, एलन भन्छन्, 'तिनीहरू पशुहरू राखे, र वास्तवमा, मानिसहरूलाई कम्तीमा आधा [अध्ययन मा] जो औषधी बाहिर गए र जान्छन् मिल्यो।’
“हामी पत्ता लगाएका छन् थाल्छ एक रोचक निष्कर्ष,” एलन भन्छन्, “यो fewest सामाजिक सम्पर्क पाएका मानिसहरू सबैभन्दा लाभ उठाउन देखिने छ. हामी यो सामाजिक समर्थन को एक निश्चित प्रकार को लागि जाते किनभने विकल्प हो जस्तो लाग्छ।” एक पहिले अनुसन्धान परियोजना त्यो वृद्ध महिला संलग्न गर्नुभयो, जो एक्लै बस्नुहुन्थ्यो, घरपालुवा संग. त्यो तिनीहरूले अझ सक्रिय हुन जान्छन् र कुनै घरपालुवा जनावरको एक्लै बस्ने अन्य वृद्ध महिला भन्दा कम रक्तचाप छ कि फेला. घरपालुवा जनावरको ध्यान र व्यायाम माग कारण, अक्सर यो तिनीहरूको मालिको अझ सक्रिय आफ्नो समकक्षों जान्छन् नगर्ने बनाउँछ. यसबाहेक, यो वृद्धि गतिविधि कम निराशा र चिन्ता रूपमा स्वास्थ्य लाभ अनुवाद, र वृद्धि, सामाजिक व्यवहार, एक्लै जो हाम्रो स्वास्थ्य गर्न लाभदायी साबित भएको छ.
त्यसैले, तपाईं शरण बाहिर भीड र आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न Fido अपनाउने गर्नुपर्छ? सबै निर्भर गर्दछ. एलन अनुसार, पाल्तु जनावर र गरेर सबैभन्दा लाभ उठाउन मानिसहरू परिवारका एक पोषित सदस्यको रूपमा जनावर हेर्न गर्नेहरू. तपाईं, यद्यपि अन्ना सोच्न सक्नुहुन्छ, जो उनको कुकुर मा सबै भन्दा राम्रो मित्र र छद्म चिकित्सक फेला छ, माइक. “उहाँले धेरै स्नेही छ,” अन्ना भन्छन्. “Mikie आफ्नो ठूलो खैरो आँखाले मलाई हेरी र म निराश छु जब प्राप्त गर्न मलाई सेना. यो उहाँले आफ्नो जीवन बचाउन र बाहिर उसलाई मलाई सोधेर गर्नुपर्छ जब कठिन छ तर त्यो पनि मैले महसुस कसरी ख्याल देखिन्छ. अब म पालनपोषण गर्न कुनै छ।” तर सत्य छ, अन्ना र माइक दुवै पालनपोषण गर्न कुनै छ.